Naomi – Gold Channel Movies
Jan. 11, 2022 The CW
Pilot Jan. 11, 2022
Unidentified Flying Object Jan. 18, 2022
Zero to Sixty Jan. 25, 2022
Shadow Ridge Feb. 22, 2022
Homecoming Mar. 01, 2022
I Am NotaUsed Car Salesman Mar. 08, 2022
Fellowship of the Disc Jun. 26, 2022
Keep Your Friends Close Jun. 26, 2022
Fallout Jun. 26, 2022
Worst Prom Ever Jun. 26, 2022
Ready or Not May. 10, 2022
Who Am I? May. 10, 2022
Naomi – season 1 (2022)
စူပါဟီးရိုးပရိသတ်တွေအတွက် တကယ်စိတ်၀င်စားစရာကောင်းတဲ့ CW series လေးတစ်ခု ထွက်ရှိလာပါပြီ။ DC comics ရဲ့ Powerhouse လို့လူသိများတဲ့ Naomi McDuffie ဇာတ်ကောင်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ series လေးပါ။
comic စာအုပ်ချစ်သူ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Naomi ဟာ စူပါဟီးရိုးတွေကို သဘောကျသူပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူမကိုယ်တိုင်မှာ စူပါဟီးရိုးပါဝါရှိနေတာကိုတော့ မသိခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို Greg နဲ့ Jen တို့က မွေးစားထားတာပါ။ သူနဲ့ စူပါမန်းက မွေးစားခံရတာချင်းတူတာကြောင့် ဘ၀တူလိုသတ်မှတ်ပြီး လေးစားအားကျနေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့‌တော့ သူနေထိုင်ရာမြို့ငယ်လေးမှာ သဘာ၀လွန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပေါ်လာရာကစလို့ သူ့ကိုယ်သူစတင်သိရှိရဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။
အဲဒီဖြစ်ရပ်အကြောင်း ဇာတ်မြစ်လိုက်ဖို့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းမလေး Anna ဆီက အကူအညီရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတင်မကသေးဘဲ Naomi တစ်ယောက် ကားအဟောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် Zumbado နဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးခဲ့ရပြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို စုံစမ်းဖို့ Anna အပြင် သူ့အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ စုစည်းမိသွားပါတော့တယ်။
သူတို့တွေ အဖြေရှာတွေ့သွားမလား၊ Naomi အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ သဘာ၀လွန်ဖြစ်ရပ်တွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲ၊ သူဟာ တကယ်ပဲ စူပါမန်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေလား၊ သူ့အနီးနားက ဘယ်သူက ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေမလဲဆိုတာကို series တစ်လျှောက်လုံး စိတ်၀င်စားစရာ၊ သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စူပါဟီးရိုးထဲမှာမှ ဆယ်ကျော်သက်စူပါဟီးရိုးစွန့်စားခန်းမျိုးဖြစ်တာကြောင့် လူငယ်ဆန်ဆန်ကြည့်လို့ကောင်းမှာ သေချာပါတယ်။ စူပါဟီးရိုး fan တွေရော teen drama ပရိသတ်တွေပါ အကြိုက်တွေ့လောက်တဲ့ series အဖြစ် ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Translated by C’mon, Sunny, Mary Christ
Hnin HninFebruary 15, 2022Reply